သူများမကောင်းကြံ ကိုသာခံနေရ - MYSTERY ZILLION
January 2008 edited December 2009 in Windows XP
သူများကို စမလို့ဆိုပြီး စမ်းလိုက်တာ အခု system restore ဘယ်နခါလုပ်လုပ် ဒီနေ့ ဒီအချိန်က နေကို နောက်မဆုတ်တော့ဘူး
start မီနူးထဲ က run ပျောက်သွားတာပါ သူများကို စတုန်း ကတော့ all program ရယ် Logoff ရယ် shutdown ရယ်ပဲ ဖျောက်ထားခဲ့တာပါ
ကို့ကွန်ပြူတာ ကိုကျမှ run ကိုဖျောက်မိလိုက်တယ်
run ကနေ ဝင်ဖျောက်ရတာလေ
ပြန်ဖော်ရင်လဲ run ကပဲ ဝင်ပြီးဖော်ရတာ.....
(ဒီနေရာမှာ run ပြန်ရှာနေလို့ တစ်ည ကြာသွားတယ်)
ပြန်ရပြီဗျာ run ကိုတော့မဖျောက်ကြနဲ့ပေါ့ တော်တော် အမြင်ကတ်ရင်တော့ ဖျောက်ထားခဲ့ ဟီး
run နေ gpedit.msc လို့ရိုက်လိုက်ရင် group policy ပေါ်လာမယ်
အဆင့်ဆင့်သွားလိုက် Local computer policy > user configuration > administrative templates > Start Menu and taskbar
ပြီးရင်ညာဘက်မှာပေါလာတဲ့ setting ထဲ မှာ ကိုကြိုက်တာကို ရွေးပြီးတော့ Enabled တွေပေး ok ပေးပြီးဖျောက်ထားခဲ့ပေတော့
တစ်ခုရှိတာက ဒါက Local group ကနေပြီးတော့ customize လုပ်တာဆို တော့ LAN မရှိရင် မရဘူးထင်တယ် Laptop က run မှာ ရိုက်လို့မရဘူး စာလုံးပေါင်းပြန်စစ်ပါဘာညာပေါ့။
ကျနော်က ခင်ဗျားပေးလိုက်တဲ ့Tip တွေကိုစမ်းတာ အိုကေတယ်..
ခင်ဗျားပေးလိုက်တဲ့ Tip ကိုသုံးနေကြာင်း၊ အသုံး၀င်ကြောင်း ..ကျနော်လိုပဲ တော်တော်များများကလည်း စမ်းကြ၊ သုံးကြကြောင်း လုံး၀ထင်ပါတယ်....(ကျနော်ကတော့ဘာမှမသိလို ့ဘာမှမမျှေ၀တာကို စိတ်မရှိပါနဲ ့)
နောင်များမှာလည်း ကိုယ်ရွွှေတော်ဆီက နည်းသစ်တွေ မျှော်လင့်ပါကြောင်း...............အသိပေးအကြောင်းကြားအပ်ပါတယ်...
ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ ကြိုးစားပါဦးမယ် သိပြီးသားတွေဖြစ်နေရင်တော့ ခွင့်လွှတ်နော် မသိသေးတဲ့သူတွေအတွက်ထားလိုက်ပေါ့။
မိုက်တယ်..း)) run ဖျောက်ပြီးရင် ဘယ်လိုပြန်ဖော်ရလဲ ဆိုတာလဲ ပြောအုံးလေဗျာ.. း)
ဟုတ်တယ်.. policy နဲ့ငြိရင် မကောင်းဘူး.. (နောက်တာ..)
ကို စ(ဇ်).. ရန်း ပျောက်သွားတာ ဘယ်ကနေပြန်ဖော်လဲဗျ..
ကို xaz ပြောတာကို ကျွန်တော့် စက်မှာတော့ အိုကေတယ်.. သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် စက်မှာ သွားလုပ်ကြည့်တော့ administrative templates အောက်မှာ Start Menu and taskbar မရှိဘူးကိုးဗျ.. သူ့၀င်းဒိုးစ်က Windows XP professional Essential v1.1 baseball2525 ဆိုပဲဗျ.. အဲဒါကြီးကို ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ.. း(
k0k0 wrote: »
ဟင် ကျနော် မနိုင်တော့ဘူးဗျို့ ကယ်ပါဦး အဲဒီ ဝင်းဒိုးတစ်ခါမှမသုံးဖူးဘူး
အဲဒါက windows version ကို ပြန်ပြင်ထားတာတွေလေ။ အသုံးမလိုတဲ့ feature တွေကို ဖြုတ်ထားတတ်တယ်။ အဲဒါကြောင့် ဖြစ်မှာပါ။ :39:
ဟုတ်.. အဲဒီမှာ လုပ်လို့မရဘူးပေါ့.. း(
မှန်ပါတယ်။ window မူရင်းversion ကို upgrate လုပ်လိုက်ပါလား။ ဒါဆို သိမ်းထားတဲ့ ဖိုင်တွေလဲမပျက်ဘူး။ window လဲ ပြန်ကောင်းသွားမယ်ထင်တယ်။
သူများစက် မှာ ကျွန်တော်က နောက်ချင်လို့ သွားလုပ်တာပါ။ အဲဒီ ဗားရှင်းက သူ့ဟာသူ ကြိုက်လို့ တင်ထားတာလေ။ Start Menu က Tools တွေ ဖျောက်တာလောက်က ကိစ်စ ရှိဘူး.. သူ့ကို နောက်ချင်လို့ ၀င်းဒိုးစ် ပါ အပ်ဂရိတ် လုပ်လိုက်တယ် ဆိုရင် ကျွန်တော့်ကို လိုက်သတ်မှာပေါ့.. ဟီးး:D
အောဟီးဟီး ဝုတ်ပဝုတ်ပ။ လိုက်သတ်ရင် ကျွန်တော့ဆီလာခဲ့။ တစ်ခါထဲ ပိုပစ်မယ် ဟိုကို။ ရဲစခန်းကိုပြောတာနော။
အမ်..အနော့်ကိုပို့မှာလား။ မလုပ်နဲ့လေ။ အဲဒီမှာ ပိုဆိုးတယ် ထင်တယ် း))
ဟုတ်တယ်ဗျာ .. Laptop မှာဘယ်လိုမှရိုက်လို ့မရဘူးဗျ .
စာလုံးပေါင်းမှားတယ်ပဲ ပြောနေတယ်ဗျာ .
Laptop မှာ Run ကမဟုတ်ပဲ ( သို ့) တစ်ခြားနည်းလေးများရှိရင် မစပါအုံးဗျာ ၊ လုပ်ကြည့်ချင်လို ့ပါ ။
taskmanager ကနေ new task လုပ်တာက run နဲ့အတူတူပဲလေ .။ အဲဒါနဲ့လုပ်ကြည့်ပါလား ? အဆင်ပြေမယ်ထင်ပါတယ် ..။
အင်း laptop တွေမှာတော့မရဘူး ..။ ဒါပေမယ့် console လေးဆောက်ပြီးသုံးပေါ့ဗျာ ..။ ဒါဆိုအဆင်ပြေမှာပါ .။ run မှာ mmc လို့ရိုက်လိုက် console အလွတ်တစ်ခုပေါ်လာမယ် .။ အဲဒီမှာ file အောက်က add/remove snap in ကနေ group polices ကိုရွေးပြီး .save လုပ်ထားလိုက်လေ ..။ ဒါဆိုရင် group policies ကို run ကနေ gpedit.msc လို့ရိုက်စရာမလိုတော့ဘူး ။ ခုနကဖိုင်လေးကိုဖွင့်လိုက်ရုံနဲ့တင် group policies ကို၀င်လို့ရပြီမဟုတ်လား ? အဓိကက group policies ကို၀င်လို့ရဖို့မဟုတ်လား ? အဆင်ပြေပါစေဗျာ ..။
run လေးကိုတစ်ကယ်ဖျောက်မိပြီဗျို. ကယ်ပါဦးဗျ။
Windows XP အသံကြားတော့ မနေနိုင်တော့လိုပါ..
သုံးလိုက်တဲ့ Winodws တွေ ၁၅ရက်ကို တစ်ကြိမ်ပြောင်းသုံးတယ်..
အထင်မကြီးပါနဲ့( image) ghost 2003 သုံးတယ်လေ၊အပိုင်းပဲ
စကားမစပ် policy က အမျိုးမျိုးရှိတယ်လို့ထင်တယ်..
local, DC, Domain,site, computer, user policy စသည့်ဖြင့် အမျိုးမျိုးပဲ
MS ကတော့ ကွန်ပျူတာဆိုင်ရာ လုံခြုံရေးကိစ္စအတွက်လို့ NT နည်းပညာနဲ့အတူစတင်မိတ်ဆက်
policy ကို မကြာမကြာပြင်လေ၊ profileတွေပြင်လေ၊စသည်ဖြင့် ကစားရတာ၊စမ်းသပ်ရတာ
ပျော်ဖို့ကောင်းပါတယ်... သိပ်မကြာပါဘူး Windows ပြန်တင်လိုက်ရတယ်..
တကယ်ကို စိတ်၀င်စားအောင် ကောင်းတဲ့ policy ပါ...
သုံးတပ်သလောက် အကျိုးရှိတဲ့ နည်းပညာပါ...
ယခုလို့ Overview ပြောခွင့်ရတာ အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်...
အခုလို ဝင်ပြောပေးတာကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ။ run တော့ပြန်ရသွားပါပြီ policy ရဲ.အခြား စိတ်ဝင်စားစရာ လေးတွေရှိလဲပြောပြပေးပါအုံး။
ဟေး ပညာရှင်ကြီးဖြစ်တော့မယ်ကွ..နည်းတွေကတော့ ရှယ်တွေပဲ..ကျေးဇူး အကိုရေ
ကျေးဇူးကမ္ဘာ အကိုရေ..ပညာတွေကတော့ လိုက်မမှီတော့ဘူး
Run ပျောက်သွားပေမယ့် gpedit.msc (Group Policy Editor) ကိုခေါ်ဖို့ဆိုတာလွယ့်လွယ်လေး
My Computer> [%windir%]>Windows>System32 ထဲမှာ gpedit.msc လို့ရှာကြည့်ပါ။ တွေ့ရင် Double Click Run ပြီပေါ့
Group Policy ရောပိတ်မလား
Registry ထဲက ပြန်ခေါ်လို့ရတယ်
Command Line ထဲက ပြန်ခေါ်လို့ရတယ်။
Format ချ Window ပဲတင်လိုက်တော့
ပိတ်လို့ရတယ်၊ ပြန်ခေါ်လို့ရတယ်ဆိုပီး နည်းလမ်းတော့ရေးပေးပူး။
တလက်စတည်း computer ထဲက data တွေကို memory stick ထဲကို ကူးလို့မရအောင် ဘယ်လို ပိတ်လို့ရမလဲဆိုတာပါ သိရင် ရေးပေးပါအုံးဗျ။
USB မသုံးစေချင်ရင် services က USB service & port ကိုပိတ်လိုက်ပေါ့......ဒါမှမဟုတ် Data ကို encryt လုပ်..ဒါမှမဟုတ် data folder ကို password ပေး..ဒါမှမဟုတ် ACL<access control list> ကိုသုံး ဒါမှမဟုတ် USB socket ဖြုတ်ထား..:)Group Policy တို့ Registry တို့စမ်းသပ်တာ ကလိတာဆိုတော့ Networking သင်တန်းက ဆင်းလာပုံရတယ်......Go on....သိထားသင့်ပါတယ်......တကယ်တော့ ဒါတွေဟာ ဘာမှမဟုတ်ပါဘူး.......Dreamgirl ပြောသလို တဖက်က လှည့် ၀င်လို့ရပါတယ်.....ဆက်ကလိ ဆက်ကလိ အားပေးတယ်........:Dကိုယ့်စက်ကိုတော့မကလိကြဘူးနော်:P:P
ခင်ဂျား တို့ကကွာ ခက်ပါတယ်။ ။ )
DreamGirl wrote: »
ပိတ်ချင်တာပိတ်ထားပါစေ.... Notepad ရှိရင်အကုန်ခေါ်လို့ရတယ်....:))
ပိတ်ထားတယ်ဆိုလို ့ပြောရဦးမယ် ကျွန်တော်တို ့အခုသုံးတဲ့နေရာကကျွန်တော်တို ့ကို limited user အနေနဲ ့ပဲပေးတယ်ကျွန်တော်က admin အနေနဲ ့သုံးချင်လို ့
ူလစ်မစ်တက်ယူဇာကနေ အက်ဒမင်အကောင့်ကို ဆောက်ပြီး သုံးလို့ရပါတယ်...
သိချင်ရင် how to hack windows ဆိုတဲ့ စာအုပ်မှာ သေးစိတ်ရေးထားပါတယ်...
စာအုပ်ကိုတော့ ဟက်ကာကြီးများဆီမှာ အလှူခံကြည့်ပါနော်... ဥပမာ ကိုစိုင်း တို့ ဇူးဇူးတို့ ကိုကို၀င်းတို့ ကိုရသာတို့ ကိုယောင်စိန်တို့
ဖြေပေးကြပါဗျို.။အဲဒီမေးခွန်းမျိုးမေးတဲ. ကို tsunalade ကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ACTUser Administrator ASPNET
Guest IUSR_PC-I IWAM_PC-I
2. net user Administrator * [hit enter]
3. leave empty [hit enter twice]
now login with administrator without password
can be used with windows while you are LAN with different system.
thanks ko princeakarit but when i tried with this way
the message is alerted in command prompted
In this computer, it also restricted the gpedit.msc and many other so on.
but i don't wanna be try with konboot or some other external bootable device
becauser these computer is in our school and it also restricted the using of
external I/O device. so i just want to do with command line or other else
but we can get internet access. so if you haveaway to break throught
from the internet , how do we solve this problem